कसरी एक सुन लटकन सफा गर्न -6तरीका सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
सुन एक सुन्दर, महँगो धातु हो, तर समयको साथ यसले यसको पुरानो चमक र चमक गुमाउन सक्छ। सुनका गहनाहरू - लन्डन र पेन्डन्टहरू - फोहोर बन्नेछन् र फीका हुनेछन्, चिल्लो पट्टिकाको साथ कभर गर्नुहोस्। तिनीहरू आवधिक रूपमा सफाई व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
गहनाका लागि यस्तो सेवा खर्च तपाईंलाई महँगो पर्नेछ। के यो आफ्नै हातले सुनका गहनाहरू सफा गर्न सम्भव छ?
यस प्रक्रियाको लागि, तपाईं तथाकथित लोक उपचारहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू सबै सस्तो, प्रभावशाली, सभ्य दृश्यमा सजावट ल्याउन सक्षम छन्।
GOI टाँसको साथ सुन सफा गर्दै
पूर्ण रूपले कुनै पनि सुनबाट पेंडन्टहरू सफा गर्दछ, एक नालीदार सतह सहित उत्पादहरू सहित। GOI टाँस्नुका साथै तपाईलाई ऊन, अमोनिया, डिशवाशिंग डिटर्जेंट र टूथब्रशको फ्ल्याप चाहिन्छ।
पहिले, फ्ल्यापमा पेस्ट लागू गर्नुहोस् र सम्भव भएसम्म सबैतिर पेंडन्टलाई रगनुहोस्।
त्यसो भए अमोनिया (1 tsp), सफा पानी (200 ml) र डिटर्जेंट (1 tsp) को समाधान पनि तयार गर्नुहोस्;
आधा घन्टा को लागि यस तरलमा गहना विसर्जन गर्नुहोस्;
समाधानबाट सुन निकाल्नुहोस्, टुथब्रशको साथ नालीदार ठाउँहरूमा खसाल्नुहोस्;
ट्यापबाट तातो पानीको धाराको साथ चीज कुल्नुहोस्;
सफा लुगाले पुछ्नुहोस्।
सिरका, प्याज र कागती - प्रभावी शुद्ध सुन
प्राकृतिक उत्पादहरूसँग सफा गर्नु सानो फोहोरका लागि उपयुक्त छ, सुनका उत्पादनहरूको सतहमा चिल्लो फिल्मसहितको कागजहरू।
9% सिरका (तालिका वा स्याउ) को साथ एक कपास प्याड ओलनुहोस् र सुन मेट्नुहोस्। भिनेगरको जस्तै प्रभाव प्याज (यसको रस) र ताजा कागतीको रस छ।
गहना सफा फ्लुइड्स
तपाईं सजिलैसँग सुपरमार्केट वा हार्डवेयर स्टोरमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। सुन प्रक्रियामा लगाईएको कोष लिनुहोस्। तिनीहरूले अमोनिया समावेश गर्दछ। यस्तो उपकरणमा सडेको नरम कपडाको साथ पेंडन्ट वा पेंडन्टको उपचार गर्नुहोस्। यदि उत्पादन धेरै फिक्का छ भने, तब यसलाई पूर्ण रूपमा तरलमा राख्नुहोस् - केही मिनेटको लागि वा तरलको निर्माताले सुन सफा गर्नका लागि सिफारिस गरेको समयको लागि (निर्देशनहरूमा वा प्याकेजि onमा)।
ध्यान दिनुहोस्! अमोनिया उत्पादनहरू ढु stones्गाहरू बिना नै उत्पादनहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
फार्मेसीमा अमोनियाको एक चिकित्सा समाधान खरीद गर्नुहोस्। 10% उपयुक्त छ। यदि कसैले बिर्सिएको छ भने, हामी सम्झन्छौं - यो अमोनिया हो। अघिल्लो विधिमा जस्तै सफा गर्नुहोस्। नतिजा कुनै नराम्रो हुनेछ, र लागत अधिक सस्तो हुनेछ।
अर्को "पुरानो शैली" - कसरी सुन सफा गर्ने
"रसायन विज्ञान" को साथ प्रयोग गर्न चाहानुहुन्न? पुरानो शैलीको तरीकामा सुन पेन्डन्ट खाली गर्न प्रयास गर्नुहोस्। 50 मिलीलीटर हल्का बियर मापन गर्नुहोस्, यससँगको कन्टेनरमा कच्चा अण्डाको पहेंलो खन्याउनुहोस्। मिश्रण पिट्नुहोस् र, यसमा एक कटन ऊन वा राग भिजेको छ, सजावट धेरै पटक मिटाउनुहोस्। त्यसपछि सफा पानी र सुकाएर धुनुहोस्।
गहनाको बिक्रीको लागि सलुनहरूमा, तिनीहरू प्राय: विशेष सुनको हेरचाह उत्पादनहरूमा पनि व्यापार गर्दछन्। यी टाँस्ने वा जेल को रूप मा घर्षण रचना हो। तिनीहरू पेट्रोलियम जेली / तेलको आधारमा चक, सेतो म्याग्नेसिया, सिसा कार्बोनेट, तलछट चट्टान (ट्रिपोली), कोरुन्डम (एमरी) को साथमा बनेका छन्।
त्यस्ता कोषहरूले तपाईंलाई सकेसम्म कुशलतापूर्वक सुनको लटकन सफा गर्न, उत्तम स्थितिमा फर्काउँदछन्, शानदार चमकमा। टाँस्ने मा घर्षण कणहरु को उपस्थितिको बावजुद, यो बिस्तारै र नाजुक व्यवहार गर्दछ। गहना सैलुनका विक्रेताहरू स्वयं यस्तै प्रकारको सुन सफा गर्छन् यदि गहनाहरु विन्डोमा "अड्किएको छ" र यसको आकर्षक उपस्थिति गुमाएको छ।
घरमा घरमा कसरी सफा गर्ने
दुई प्रेमी (फोटो) को लागी पेंडन्ट कसरी छनौट गर्ने?
घरमा सुन कसरी सफा गर्न सरल सरल सुझाव
अस्थायी ट्याटूहरू कति लामो हुन्छ? तिनीहरूको प्रकारहरू र अनुप्रयोग विधिहरू मध्ये एक
चाँडै र कुशलतापूर्वक घरमा चाँदी श्रृंखला कसरी सफा गर्ने?
55 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,397 प्रश्नहरू।